दाम्पत्य जीवनमा किन हुन्छ कलह ? – Lokpati.com
नेपाल प्रहरी पक्राउ नेकपा नेपाली काँग्रेस अपराध प्रचण्ड नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी अमेरिका राशिफल मृत्यु प्रधानमन्त्री सरकार केपी शर्मा ओली चितवन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड
By लाेकपाटी न्यूज On ५ माघ २०७६, आईतवार ११:४३
काठमाडौं। पती-पत्नीले एकअर्कालाई माया गर्नु, विश्वास गर्नु, भरोसा गर्नु स्वभाविक हो। जब तपाई पार्टनरलाई अधिक प्रेम गर्नुहुन्छ। यो एकदमै सकारात्मक कुरा हो। तर, यससँगै पार्टनरको आकंक्षा भने बढ्नु हुँदैन।
यदि त्यसो भयो भने तपाईहरुको सम्बन्ध कहि न कहि पुगेर नराम्ररी टुट्न सक्छ। भनाई नै छ, चिनी पनि धेरै खायो भने तीतो हुन्छ। दाम्पत्य सम्बन्धमा पनि यो लागु हुन्छ। चाहे व्यवहारमा होस् वा भावनाको कुरामा नै, एउटा निश्चित दुरी भने राख्नुपर्छ।
१. हरक्षण चासो राख्नुः हामी सोच्छौ कि, हरक्षण पार्टनरको ध्यान राखौं। उनको केयर गरौं। भलै तपाईले प्रेमपूर्वक यस्तो व्यवहार देखाउनुहुन्छ। सुत्ने, उठ्ने, खाने, लगाउने कुरामा चासो राख्नुहुन्छ। उनलाई यस्तो खानु, उस्तो लगाउनु, यतिबेला उठ्नु भनेर भन्नुहुन्छ। तर, पार्टनरलाई बन्धनमा परेको महसुष हुनसक्छ। यसले विस्तारै सम्बन्धमा फाटो ल्याउन सक्छ।
२. स्पेश दिनुपर्छः सम्बन्ध चाहे जेसुकै होस्, त्यसमा स्पेश दिनु एकदमै जरुरी हुन्छ। स्पेश नदिदा प्रेम कम हुन्छ। मनमुटाव, भनाभन बढी हुन्छ। आपसी निकटताले दुरी पैदा गर्न सक्छ।
३. अधिकार लाद्न खोज्नुः पार्टनरको निजी जीवनलाई पनि स्विकार गर्नुपर्छ। सधै पार्टनरमाथि आफु हावी हुनु भनेको पनि संकट निम्त्याउनु नै हो। पार्टनरमाथि आफ्नो अधिकार लाद्न खोज्नु हुँदैन। यसले सम्बन्धलाई फितलो बनाइदिन्छ।
४. सधै पार्टनरकै साथमा रहनुः बढी प्रेम गरिन्छ र हरक्षण पार्टनरसँगै बस्ने इच्छा हुनसक्छ। तर, यस्तो इच्छालाई त्याग्न सक्नुपर्छ। पार्टनर जहाँ जान्छ, आफुपनि त्यही जाने। जे गर्छ, आफुपनि त्यही गर्ने काम ठीक हुन्छ। कहिले कहि पार्टनरलाई आफ्नो साथीभाईसँग छ्टै समय बिताउन मन लाग्छ, कहिले आफ्नो परिवारसँग। त्यस्तो अवस्थमा आफु बाधक बन्नु हुँदैन।
५.धेरै अपेक्षा गर्नुः अक्सर हामी पार्टनरबाट बढी अपेक्षा गरिरहेका हुन्छौं। हामी आफुले जे सोच्छौं, जे चाहन्छौ, जस्तो मन पराउँछौ। पार्टनर त्यही रुपमा प्रस्तुत भइदियोस् भन्ने अपेक्षा हुन्छ। यस्तो अपेक्षा पुरा भए त ठीकै हुन्छ। यदि पूरा नभएको अवस्थामा हामीमा खिन्नता हुन्छ। त्यसैले बिस्तारै सम्बन्ध फिका हुँदै जान्छ।
६. शंका नगरौः पार्टनरलाई सधै शंकाको दृष्टिले हेर्नु उचित हुन्न। हरेक समय फोन गरेर ‘के गरिरहेका छौं’ भनेर सोध्नु। फोन, म्यासेज, फेसबुक जाँच्नु जस्ता व्यवहारले कलह सुरु गर्छ।
सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसेमा कर्फ्यू आदेश जारी